Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D 1.340 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.340 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D
Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
, သင့်အမဲလိုက်ဂီယာစုဆောင်းတစ်ဦးသေနတ် load, သင့်အာရုံထက်မြက်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့အမဲလိုက်နေရာများတွင်ရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကိုခြေရာခံရန်အချိန်။ အစစ်အမှန်မုဆိုးဖြစ်လာနှင့်ရိုင်းများ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုဖြေကြား!
သငျသညျအမဲလိုက်ဂိမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသော Modes သာကြိုးစားနေအကြောင်းကိုအိပ်မက်မက်နေကြသည်: အခမဲ့အမဲလိုက်ခြင်း, အမဲလိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှု, အားကစားအမဲလိုက်လှုပ်ရှားမှုများ?
သငျသညျ 1v1 PvP အွန်လိုင်း mode မှာအခြားအကိုမှန်ကန်မုဆိုး, shooters, riflemen နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်စိတ်ဝင်စားပါသလား?
သငျသညျ, တစ်ဦးသေနတ် load ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသင့်ရဲ့ ShotGun upgrade, crossbow, ကိုးကွယ်သို့မဟုတ်ရိုင်ဖယ်, တစ်ဦးဘဲ, ဝံပုလွေ, grizzly, သမင်ဒရယ်သို့မဟုတ်အခြားမုဆိုးဂိမ်းရိုက်ကူးဖို့စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ပါသလား
Wild Hunt အင်္ဂါရပ်များ:
→ Hunt ကသမင်ဒရယ်သို့မဟုတ်အခြားဂိမ်း: grizzly bears, ဝံပုလွေ, ဘဲနှင့်ပိုပြီးရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များ
→တောအုပ်, တောင်တို့, သစ်တောများသို့မဟုတ်ဆာဗားနားထဲမှာအမဲ Go
အာဖရိက, ဥရောပ, သြစတြေးလျ, အမေရိကသို့မဟုတ်အာရှရှိ→အလည်တစ်ခေါက်အမဲလိုက်ဒေသများ
→လေ, မိုးရွာရွာနှင့်ဂီယာနှင့် ammo ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများသတိထားပါ။ ဒါဟာရရှိနိုင်အရှိဆုံးလက်တွေ့အမဲလိုက်ဂိမ်းပဲ!
→, သင့်အမဲလိုက်ကျွမ်းကျင်မှု Hone 1v1 PvP အွန်လိုင်း mode မှာယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတိရိစ္ဆာန်မုဆိုးဖြစ်လာ!
→အသစ်တခုအမဲလိုက်ကလပ် Create သို့မဟုတ်တည်ဆဲတဦးတည်း join ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတစ်မုဆိုးပျော်စရာရှိသည်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမဲလိုက်ကလပ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှန်းကျင်ကနေသူချင်းမုဆိုးတွေ့ဆုံရန်!
အမဲလိုက်ခြင်း Club join သို့မဟုတ်ဖန်တီး!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ် feature အသစ်ခံစားကြည့်ပါ - မဲလိုက်ကလပ်! အဘယ်အရာကိုသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအမဲထက် ပို. စိတ်လှုပ်ရှားစရာလား အဆိုပါရာနှင့်ချီနေပြီတည်ဆဲအမဲလိုက်ကလပ်အသင်းတွေထဲက join သို့မဟုတ်အသစ်တဦးတည်းဖန်တီးနှင့်သင့်သူချင်းမုဆိုးဖိတ်ခေါ်! Hunt ကအတူတကွနဲ့အချိန်-ကန့်သတ်ထားအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ရပ်များအခြားကလပ်အသင်းနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်!
တိရိစ္ဆာန်အမဲလိုက်ပြိုင်ပွဲ & ချန်ပီယံ - ယခုယှဉ်ပြိုင်!
ဦးဆောင်သူတက်နှင့်ကျော်ကြားတိရိစ္ဆာန်အမဲလိုက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်လာ! တောရိုင်း Hunt ကခုနှစ်မှာသင်ကအခမဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အမဲလိုက်ပြိုင်ပွဲနှင့်ချန်ပီယံများများရှာပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ PvP အွန်လိုင်း mode ကိုအခြားမုဆိုးစိန်ခေါ်နှင့်သင်အမှန်တကယ်မင်အမဲလိုက်မာစတာနေသက်သေပြအဖြစ်စုံလင်ရန်သင့်အမဲလိုက်ကျွမ်းကျင်မှု Hone! အကောင်းဆုံးကိုသမင်သေနတ်သမားအနိုင်ရရှိပါစေ!
ရီးရဲလ်တည်နေရာ - အစစ်အမှန်တိရိစ္ဆာန်များ
အားလုံးတိုက်ကြီးအနှံ့လက်တွေ့အမဲလိုက်နေရာများမှခရီးသွားနှင့်သဘာဝသူတို့အားနယ်မြေတားစီးကြောင်းအစစ်အမှန်တိရိစ္ဆာန်များကိုလိုက်ရှာနိုင်။ သမင်တစ်ဦးရှိ fox သို့မဟုတ် Yellowstone သို့ပန်းခြံ (USA) အတွက်ဝံလိုက်ရှာ, မြစ် (အီဂျစ်) တစ်ဦးကြံ့လိုက်အာတိတ်သမုဒ္ဒရာ (ရုရှား) အတွက်ပင်လယ်ဖျံကြီး entrap, သြစတြေးလျ Outback အတွက် dingo ပစ်မှတ်ထားပြီးအများကြီးပို! ညာဘက်သင့်မိုဘိုင်း device မှ, အများဆုံးထူးခြားဆန်းပြားအစက်အပြောက်ဖို့အမဲသွားပါ။ ဂိမ်းများကိုရိုက်ကူးမင်ရုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသွားလေ၏!
အခမဲ့အမဲလိုက်ပစ္စည်းကိရိယာများမှသင်၏အကြိုက်ဆုံးဂီယာ Get သို့မဟုတ်အသစ်မဝယ်။ ရိုင်ဖယ်အကြားကိုရွေးချယ်ပါ, တစ်ဦး ShotGun သို့မဟုတ်တစ်အားကစားအမဲလိုက် crossbow နှင့်သင်၏မြှားပစ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသ။ ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအမဲလိုက်ဂိမ်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဂီယာကိုရွေးချယ်ခြင်း, မှန်မှန်ပြုလုပ် Fix နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်။ သင်တစ်ဦးဂန္လေးကို-and မြှားပန်ကာတစ်ခုသို့မဟုတ်သေနတ်ဇှတျထိုးသမားပါပဲပဲဖြစ်ဖြစ်, တောရိုင်း Hunt ကတစ်မဲလိုက်လက်အိတ်ကဲ့သို့သင်၏လိုအပ်ချက်များကို fit သင်မုဆိုးတဲ့ကုန်းမြေရဲ့အထွတ်အသားစားဖြစ်လာပါစေလတံ့သောလက်နက်ရှိပါတယ်!
စိတ်ကြွဆေး 3D Graphics
အဘယ်အရာကိုရှိသမျှသည်အခြားသော action ကိုသေနတ်ပစ်ဂိမ်းအနေဖြင့်တောရိုင်း Hunt ကခွဲထား 3D ဂရပ်ဖစ်သွေးဆောင်သည်။ လက်နက်နယ်ပယ်များမှတဆင့် Hunt တိရိစ္ဆာန်အပေါ်အနီးကပ်သူလျှို, ရည်ရွယ် ယူ. ဂရုတစိုက်မောင်းဆွဲထုတ်! နှေးပြကွက်ထဲမှာကျည်ဆံယင်ကောင်အဖြစ် Watch, ချုံဖုတ်မှတစ်ဆင့်မျက်ရည်နှင့်ပစ်မှတ်တာမျိုး - Bullseye!
အကောင်းဆုံးများထဲမှ & ထိပ်တန်းငါးဖမ်း apps များဝင်ငွေရရှိခဲ့သည် - - စေမယ့်ငါးများ၏အရည်အချင်းဖန်တီးသူကတီထွင်တောရိုင်း Hunt ကအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမဲလိုက်နေရာများပေါ်တွင်အခြေခံဂရပ်ဖစ် captivating အတူလူမှုရေးအရေးယူ-ထုပ်ပိုးအားကစားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးစွာသောအိမ်ပြင်သို့ထွက်အဆင့်, သင့်လက်နက်ကိုရွေးချယ်ပါ, ရည်ရွယ် & ပစ်ခတ်ယူပါ! သစ်မိတ်ဆွေများကိုရှာပါသည့်အမဲလိုက်ကလပ် join သို့မဟုတ်ဖန်တီးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူပါ။ ဂိမ်းများကိုရိုက်ကူးမင်ရုံတပြင်လုံးကိုအသစ်သောအဆင့်တွင် advanced - နောက်ဆုံးတော့သူက 2019 ခုနှစ်ရဲ့ကဲ့သို့ခံစားရကြောင်းတစ်ခုခု!
Facebook မှာ https://www.facebook.com/wildhuntapp/ အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ
ရိုင်း Hunt က - အကြီးမြတ်ဆုံးမိုဘိုင်းအမဲလိုက်ဂိမ်းထဲကတစ်ခု။ အခမဲ့ NOW က DOWNLOAD!
Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D အား အခ်က္ျပပါ
dwiko-lukito စတိုး 158.61k 64.81M
Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.340
ထုတ်လုပ်သူ Ten Square Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/Terms-of-Service-EN-WH.pdf
App Name: Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D
လက်မှတ် SHA1: 43:FC:BE:C1:64:D7:7F:08:BC:9E:4E:0C:53:55:CE:D0:6C:29:89:1A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): huntmobile
အဖွဲ့အစည်း (O): Ten Square Games Sp. z o.o.
နယ်မြေ (L): Wroclaw
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): dolnoslaskie
Wild Hunt:Sport Hunting Games. Hunter & Shooter 3D APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ